Internet Explorer ကို | November 2019
Internet Explorer အတွက် Visual bookmarks ကို
မည်သည့် browser မှာပြုလုပ်သင့်စာညှပ်များရန်သင့်အကြိုက်ဆုံး site ကို add နှင့်မလိုအပ်သောရှာဖွေမှုများကိုမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မပြန်လာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆင်ပြေအလုံအလောက်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဲဒီ bookmarks ကိုအတော်လေးအများကြီးစုပြုံနေနိုင်ပြီးခက်ခဲဖြစ်လာမှဝဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုပါ။ တိကျတဲ့တည်နေရာသို့မဟုတ် browser ကို control panel ထဲကထဲတွင်နေရာသေးသေးသေးသေးလေးကို web စာမျက်နှာများတွင် - ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခြေအနေအမြင်အာရုံ bookmarks ကိုကယ်တင်ပါစေသော။
Internet Explorer browser ကို configure
က Internet Explorer ၏ installation ပြီးနောက်, သငျသညျမူရင်း setting ကိုထွက်သယ်ဆောင်ရပေမည်။ သူမ၏မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်အစီအစဉ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေအဖြစ်လုပ်ရန်။ ဘယ်လိုက Internet Explorer ၏ Internet Explorer ကိုအထွေထွေ Properties ကိုကနဦး setup ကို configure လုပ်ဖို့အတွက်ဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် "Tools များ - ။ Internet Options ကို"
Google Toolbar plug-in ကို Internet Explorer အတွက်
Internet Explorer ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်, အချို့သောအသုံးပြုသူများဖွဲ့စည်းမှုတွင်ထည့်သွင်းသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏အကွာအဝေးနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိကြပေ။ ယင်း၏စွမ်းရည်ချဲ့ထွင်ရန်, သငျသညျအပိုဆောင်း applications များဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ က Internet Explorer အတွက် Google Toolbar ကို - ကို browser အတွက်ဆက်တင်အမျိုးမျိုးပါဝင်သောအထူး panel ကဖြစ်ပါတယ်။
က Internet Explorer ၌သင်တို့၏သိမ်းဆည်းထားသောစကားဝှက် View
အဆင်ပြေဆိုက်တစ်ခုအဆင်ပြေပြေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် access ကိုဖြင့်ဝက်ဘ် surfing သူတို့အပျေါမှာ passwords များကိုသိုလှောင်ခြင်းမရှိဘဲစိတ်ကူးရန်ခက်ခဲကြောင်း, တောင် Internet Explorer မှာဒီ feature ရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤဒေတာအများဆုံးသိသာသောအရပ်၌မရှိသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဘာလဲ? ကိုယ့်အကြောင်းကျနော်တို့ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။ က Internet Explorer အတွက်ကြည့်ရန် passwords များကို IE ကိုတင်းကျပ်စွာကို Microsoft Windows သို့ပေါင်းစည်းကြောင့်, မြို့သားသိမ်းဆည်းထားအသုံးပြုသူ ID နှင့် password များဝဘ်ဘရောက်ဇာထဲမှာပေမယ့်စနစ်ရဲ့သီးခြားအပိုင်း၌နေကြသည်မဟုတ်။
ယခင်ကသွားရောက်ခဲ့က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမိတ္တူ, ပုံများ, က်ဘ်ဆိုက်ဖောင့်နှင့်ပိုပြီးဒါခေါ် browser ကို cache ထဲတွင်သင့် hard drive ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံသိုလှောင်မှုဒီမျိုး, ထပ်ကြည့် site ကိုအရှင်ဝဘ်အရင်းအမြစ် loading ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်, ပြီးသားဒေါင်းလုပ်လုပ်အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့အဘို့အခွင့်ပြုခြင်း။
က Internet Explorer ။ ယာယီဖိုင်တွေသိမ်းထားဖို့ Directory ကို
Temporary Internet files folder ကို (ဖိုင်တွဲများအတွက် browse) ကွန်ရက်ထံမှလက်ခံရရှိသည့်ဒေတာသိုလှောင်များအတွက်ကွန်တိန်နာအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်က Internet Explorer, ဒီဖိုလ်ဒါကိုကို Windows directory ထဲတွင်တည်ရှိသည်။ Users username ကို AppData ဒေသခံ Microsoft Windows INetCache: တစ်ကို PC user profiles များအားလုံးပြင်ဆင်ထားသောလျှင်မူကား, ကအောက်ပါတည်နေရာကို C မှာတည်ရှိပါတယ်။
က Internet Explorer နှင့်အတူပြဿနာများ။ ပြဿနာများကိုရှာဖွေရေးမှာနဲ့ fix
က Internet Explorer ပြဿနာများနှင့်အတူအခြားမည်သည့် program နဲ့အမျှပေါ်ပေါက်နိုင်သည် Internet Explorer အားစာမျက်နှာဖွင့်မထားဘူးအကြောင်း, ဒါကြောင့်မှာအားလုံးမစတင်ပါလိမ့်မယ်။ တိုတိုမှာပြဿနာကို Microsoft ကနေတစ်ဦးချင်းစီလျှောက်လွှာနှင့်အတူအလုပ်, နှင့် built-in browser မှာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ က Internet Explorer7သို့မဟုတ်အလုံအလောက်ထက်ပိုမဆိုအခြား operating system windose အပေါ် windose 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပေါ်မှာ Internet Explorer ကို run မထားဘို့ windose အကြောင်းပြချက်အပေါ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးသောအကြောင်းပြချက်။
IE ကို။ သင့်ရဲ့သိမ်းဆည်းထားသောစကားဝှက် View
တခြား browser ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အက Internet Explorer (IE) အသုံးပြုသူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဝက်ဘ်ဘအရင်းအမြစ်ကိုရယူပေးဖို့ login သတင်းအချက်အလက်များ (login နဲ့စကားဝှက်) ကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုတော်မူသော, စကားဝှက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်။ သင်အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကိုကြည့်ဖို့မည်သည့်အချိန်တွင်ထို site ကိုဝင်ရောက်ဖို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုကြောင့်အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။
Internet Explorer အတွက် Yandex Element တွေကို
က Internet Explorer (2012 သည်အထိကြာမြင့်သောအစီအစဉ်၏ဗားရှင်းအဟောင်းများ၏အမည်) Internet Explorer ကိုသို့မဟုတ် Yandex ဘားများအတွက် Yandex Element တွေကို - browser ရဲ့ add-ons တွေကိုများ၏ပုံစံအတွက်အသုံးပြုသူမှတင်ဆက်သောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ application ကို။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ - functional web browser ကိုတိုးချဲ့နှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူတိုးတက်အောင်။
သင့်ရဲ့ default browser က Internet Explorer ကို Install လုပ်ခြင်း
ကို default browser ကို - သင့်ကို default ဝဘ်စာမျက်နှာကိုယူပါလိမ့်မယ်တဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသင့်အားဝက်ဘ်ဆိုက်များ browse နိုင်သည့်နှင့်အတူနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်ရှိပါကကို default browser ကိုရွေးချယ်ရာတွင်များ၏ concept ကိုသာအသိစေသည်။ သင်က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု link ကိုလည်းမရှိသည့်အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်မှတ်တမ်းမှတ်ရာကိုဖတ်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြတ်သန်းသွားလျှင်ဥပမာ, ထို့နောက်သင်အကောင်းဆုံးကြိုက်နှစ်သက်သောဘရောက်ဇာထဲမှာသင့်ရဲ့ default browser မှာဖွင့်ပါနှင့်မည်မဟုတ်။
Step-by-step ။ Internet Explorer ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ယနေ့အထိရှိအလွယ်တကူ install လုပ်ပြီးသားများနှင့်ဖယ်ရှားနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသော browser များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖြစ်ကြပြီး built-in (Microsoft က Windows အတွက်) - Windows ပေါ်မှာအကြာတွင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သော Internet Explorer ကို 11 (IE), ၎င်း၏ Analogues ထက်ပိုပြီးခက်ခဲ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မည်သည့် Toolbars သို့မဟုတ်အထူးပြုအစီအစဉ်များကို အသုံးပြု. ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ် Uninstall အ, ဒါမှမဟုတ် banal ဖယ်ရှားရေးပရိုဂရမ်တစ်ခု directory ကိုပြေးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး: အဆိုပါအရာသည် Microsoft ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖြုတ်မရနိုင်သည်ကိုသေချာစေတော်မူပြီဖြစ်ပါတယ်။
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်က Internet Explorer နှင့်အတူဆင်း
Windows 10 ကိုအသုံးပြုသူများကကူညီပေမယ့် OS ကို built-in browser ကိုနှစ်ခုနှင့်အတူတစ်ချိန်ကလာသတိထားမိမနိုင်: Microsoft က Edge နဲ့ Internet Explorer (IE), နှင့် Microsoft Edge က၎င်း၏စွမ်းရည်များနှင့် user interface ကို IE ကိုထက်အများကြီးပိုကောင်းထွက်ချထား၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ အသုံးပြုသူများသည်မကြာခဏမေးခွန်း IE ကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါကြောင့်က Internet Explorer ၏အသုံးပြုမှုများ၏ညျသငျ့လျြောထဲကလာမယ့်နီးပါးသုညဖြစ်ပါတယ်။
က Internet Explorer အတွက် cookies များကိုဖွင့်ခြင်း
ကွတ်ကီးသို့မဟုတျရုံ cookies တွေကို - browsing အခါအသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာကိုစလှေတျတျောကြောင်းအချက်အလက်များ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစ။ စည်းကမ်းအဖြစ်, ထိုသူတို့အသုံးပြုသူနှင့်တူသောအပေါ်စာရင်းဇယားစောင့်ရှောက်ခြင်း, တစ်ဦးအထူးသဖြင့် Web ကိုသယံဇာတအပေါ် user settings ကိုများနှင့်တစ်ဦးချင်းဦးစားပေးသိုလှောင်, authentication များကိုအသုံးပြုကြသည်။
Internet Explorer ကို မှလွဲ. အဘယ်ကြောင့်ပြုကြအားလုံးမဟုတ် browser များ
တခါတရံမှာအသုံးပြုသူများက Internet Explorer မှလွဲ. အားလုံး browser များမရှိတော့အလုပ်လုပ်သည့်အခါပြဿနာတစ်ခုရင်ဆိုင်ရပေမည်။ အတော်များများကစိတ်မပျက်ဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပျက်များနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမှပါသလဲ? ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေကြပါစို့။ အဘယ်ကြောင့်သာလျှင် Internet explorer, နှင့်အခြား browsers တွေဗိုင်းရပ်စ်ဤပြဿနာများ၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းမရှိသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် malware များထည့်သွင်းအဲဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။
က Internet Explorer အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရက်ဘ်ဆိုက်များမှ site တစ်ခုပေါင်းထည့်ခြင်း
အတော်လေးမကြာခဏအင်တာနက် Explorer ကိုအဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးအချို့ဆိုဒ်များမပြနိုင်ပါ။ ဒါဟာဘရောက်ဇာကိုအင်တာနက်အရင်းအမြစ်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရအတည်မပြုနိုင်သောကွောငျ့အချို့ကို web content တွေကို, ရွာပိတ်ဆို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ထို site ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချရက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းက add ရပါမည်။
က Internet Explorer ။ ဘရောက်ဇာကို reinstall နှင့် restore
က Internet Explorer (IE) ၏တင်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူမကြာခဏပြဿနာများ browser ကို restore သို့မဟုတ် reset ဖို့အချိန်ကြောင်းကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ဒါဟာအတော်လေးအစွန်းရောက်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထင်ရပေမယ့်တကယ်က Internet Explorer restore သို့မဟုတ်ကြောင့် re-install ပါလိမ့်မယ်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။
က Internet Explorer အတွက်အော့ဖ်လိုင်းကို disable
အဆိုပါ browser မှာ offline mode - ကအင်တာနက်ကိုလက်လှမ်းခြင်းမရှိဘဲ, သင်ယခင်ကကြည့်ရှုအားပေးမယ့် web page ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးအဆင်ပြေဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်ဤ mode ကိုထွက်ရနျလိုအပျသညျ့အခြိနျအခါရှိပါသည်။ browser ကိုယခုအလိုအလျှောက်ပင်ကွန်ရက်၏ရှေ့တော်၌, အော့ဖ်လိုင်း mode သို့သွားပါလျှင်စည်းကမ်းနှင့်အမျှဤအမှုကိုပြုသောရမည်ဖြစ်သည်။
Windows7က Internet Explorer ကို disable
Built-in Internet Explorer browser ကို (IE) ကို Windows အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများမှမြည်းစမ်းဖို့ရှိသည်နှင့်သူတို့အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုကြည့်ရှုဘို့အခြားရွေးချယ်စရာဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၎င်းတို့၏ preference ကိုပေးဖို့ပိုများပါတယ်မထားဘူး။ စာရင်းများအရက IE ရဲ့လူကြိုက်များနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျရောက်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ PC ကိုမှအဘရောက်ဇာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်ဖို့ယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်အလုပ်က Internet Explorer browser ကိုရပ်တန့်
သငျသညျက Internet Explorer နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ browser ကိုသူ့အလုပ်၏ရုတ်တရက်ရပ်နားခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်မျှကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပျက်ပေမယ့် browser ကိုတိုင်းနှစ်မိနစ်ပိတ်လိုက်သောအခါ, အဘယ်ကြောင့်အံ့ဩခြင်းမှအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အကယ်. ရဲ့အတူတကွရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြပါစို့။ အဘယ်ကြောင့်အလုပ်၏ရုတ်တရက်ချုပ်ရာက Internet Explorer အတွက်ရှိပါသလော
က Internet Explorer Settings ကို
အမှားများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း browser setting ကိုအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်သင့်အသိပညာမပါဘဲအပြောင်းအလဲကို Web browser settings ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်တတိယပါတီများ၏လုပ်ရပ်များ၏ရလဒ်အတွက်ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်က Internet Explorer အတွက်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ အသစ်က parameters တွေကိုထံမှပျေါထှနျးသောအမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်အထူးသဖြင့်အမှု၌သင်တို့ကို default settings ကို restore လုပ်ဖို့ဆိုလိုသည်မှာ, သင့် browser setting ကို reset ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။